Maxaa Cusub – Page 43 – Shabakadda Amiirnuur
Askari Ka Tirsan Ciidamada DF oo Qof Shacab Ah Ku Dilay Siinaay.
Askari ka tirsan ciidamada DF ayaa maanta wiil dhallinyaro ah ku dilay isgoyska Siinaay ee magaalada Muqdisho. Wiilka dhallinyarada oo lagu magacaabi jiray Maxamad Abuukar Tuuryare ayaa la sheegay inuu sagootinayay dad ehelkiisa ah waxayna murmeen askariga taasoo keentay in la toogto. Durbadiisa askariga wax toogtay ayaa goobta isaga baxsaday […]
Gaari Dagaal oo Ciidanka Kenya Looga Gubay Hosingow.
Wararka naga soo gaaraya degaanka Hosingow oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose ayaa waxay sheegayaan in gaari dagaal looga gubay ciidanka shisheeye ee Kenya. Xarakada Al-Shabaab ayaa qarax weyn la beegsatay gaari nooca gaashaaman ah oo ay askarta Kenya la socdeen kaasoo gabi ahaana basbeelay. Inta la xaqiijiyay waxaa ku […]
Qarax Ay Shacab Ku Dhinteen oo Ka Dhacay Xaawo Cabdi.
Faahfaahin ayaa kasoo baxaysa qarax shalay subixii ka dhacay degaanka Xaawo Cabdi oo dhaca inta u dhaxaysa Muqdisho iyo Afgooye. Wararka laga helayo dhacdadan murugada leh ayaa waxay sheegayaan in tobaneeyo qof ay dhinteen markii uu qaruxu haleelay gaari Caasi ah oo ka tagay Xamay kuna jeeday Wanlaweyn. Dadkii ku […]
Hey’adda Amnest oo Soo Bandhigtay Tacadiyo Ka Dhacay Itoobiya.
Hey’adda u dooda xuquuqda aadanaha ee Amnasti Internashnaal ayaa ka hadasha tacaddiyo kala duwan oo ka dhacay gudaha dalka Itoobiya. Warbixin ay hey’addu soo saartay ayaa waxay ku sheegtay in tan iyo sannadkii 2019kii ay dalka Itoobiya ka dheceen tacadiyo ay geysteen ciidanka Mitatariga kuwaasoo isugu jira dil, xarig iyo […]
Al-Shabaab oo Ka Hadashay Qarax Sarkaal Lagu Dilay oo Xamar Ka Dhacay.
Faahfaahin dheeraad ah ayaa kasoo baxaysa qarax barqanimadii maanta ka dhacay degmada Xamarweyne gaar ahaan agagaarka Madaxtooyada. Sida ay inoo sheegeen goob joogayaal magacooda iyo codkoodaba qariyay, waxaa qaraxa lala beegsaday sarkaal ka tirsanaa Boliska DF, xilli uu marayay agagaarka Hotelka Muna ama dhabarka dambe ee Barxada Iskaashatooyinka. Qaraxa ayaa […]
Dhiigga Soomaalidu ma sunbaa? Ma aqaan qawlkaas ama (athar-kaasi) saxnimadiisa laakiin waxa jira kelmad laga soo dheegto Ibn Casaakir una meel-martay culimada oo la’ yidhaahdo hilibka culimadu waa sumaysan yahay: (لُحُوم الْعلمَاء مَسْمُومَة). oo looga jeedo qofka dhiba culimada wuu ku sumoobaa oo kama faa’iido, ama si xun buu u […]
Dhageyso Qeybta 13-aa Barnaamijka (Al-Xuruubu Saliibiyah)
Warbaahinta Islaamiga ee Al-furqaan oo bil walba oo Ramadaan ah baahisay barnaamij Taariikheed ayaa waxay halkan idinkugu soo baahineysaa barnaami cusub oo taxane ah kuna saabsan taariikhda “Xuruubusaliibiyah”. Barnaamijka oo inoo socon doona inta lagu guda jiro soonka ayaa wuxuu ka sheekeynayaa duullaanadii ay faranjidu ku qaaday halbowlayaasha caalamka islaamka […]
Dhageyso: Xalqada 10aad dhulalka laboobay ee Muslimiinta sidee loo qabsaday dalka Turkistaanta Bari.
Dhulalka laboobay waa barnaamij xiisa leh oo looga qisoonayo dhulalka muslimiinta ee cadowgu boobay, barnaamijkan ayaa macluumaad dhammeystiran kaa siinaya hadimadda loo maleegay umaddan muslimka ah. Xalqadan oo ah middii 10aad waxaa lagu faah faahinayaa qaabkii loo qabsaday dhulalka muslimiinta Turkistaanta Bari ee Shiinuhu uu gummeysto Halkan Ka Degso Barnaamijka
Xafiiska Siyaasadda iyo wilaayada Islaamiga Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa soo saaray bayaan muhiim ah oo ku saabsan xasuuqa ay diyaaradaha dagaalka Mareykanka ku hayaan shacabka Soomaaliyeed. Bayaanka oo ku qurnaa luqadaha Carabiga,Englishka iyo Soomaali ayaa diiradda lagu saaray heerka ay gaarsiisanyihiin duqeymaha lagu gummaadayo shacabka wuxuuna bayaanku soo gudbinayaa tira […]
Yahuuda oo Cuuriyaamisay Shaqooyinka iyo Mustaqbalka Dhaqaale Ee Reer Falastiin.
Dr.Cabdiraxmaan Abu Rukba ayaa sharraxay xaaladdiisa ku dhawaad 7 sano kadib markii uu qaatay shahaadada jaamacadeed ee taariikhda casriga isagoo aan shaqo ka helin Gaza. Markii uu ka qalin jabiyay Machadka Daraasaadka Jaamacadda Carabta ee Qaahira sanadkii 2012, wuxuu rajeynayay inuu ku heli doono jidkiisa qeybta waxbarashada jaamacadda, laakiin wuxuu […]